Mozilla Firefox waxay soo bandhigtay astaan ​​cusub oo ah nooca 23 Beta | Laga soo bilaabo Linux
Mozilla Firefox waxay soosaaraysaa astaan ​​cusub nooca 23 Beta
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Xaqiiqdii waa isla astaantii hore, laakiin leh xoogaa hagaajin ah oo loogu talagalay qaabkeeda si loogu waafajiyo aaladaha moobillada ee shaashadda hooseeya.
In kasta oo sida ay noo sheegeen ay ku jiraan FirefoxmaniaSida muuqata naqshadeeyayaasha ama xubnaha kooxda hal-abuurka ee Mozilla waxay jeclaadeen soo-jeedinta cusub ee qalabka intiisa kale.
Waan jecelahay isbedelka, waxay umuuqataa mid nadaafad iyo qurux badan. Waxaan isbarbar dhigi karnaa adoo fiirinaya sawirka soo socda oo muujinaya isbedelka astaanta Firefox ilaa 2004.
Waxaad ka arki kartaa sharraxaad faahfaahsan ee naqshadeynta barta Sean Martell.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Mozilla Firefox waxay soosaaraysaa astaan ​​cusub nooca 23 Beta
51 faallooyin, ka tag taada
Offtopic mir wuxuu horey u taageeray gnome shell, lubuntu, xubuntu.
Kubuntu na ma isticmaali doonto .. 😛
1) Way adkaan doontaa markaad haysato Ubuntu, waxaad dooneysaa inaad rakibato Kubuntu Desktop
2) Mir dhamaadka wuxuu u socdaa ubuntu 13.10, oo leh X qaabka dib u dhaca.
Miyaanad kaliya ku dari karin lambarrada X11 si aad uga dhigto shaqo dib u dhac ah?
sida muuqata sababo la xiriira khilaafka joogtada ah ee u dhexeeya dadka Kubuntu iyo Canonical, Kubuntu ma sii ahaan doonto dhadhan Ubuntu laakiin waxay noqon doontaa disto sooc ah (sida Mint tusaale ahaan).
Hmmm way noqon kartaa, haa, laakiin arimuhu si xun ayey u fool xumaan doonaan markay yimaadaan si ay u waajahaan dariiqyada 'Wayland distros' ee ay ku leeyihiin Mir ... ma qurux badnaan doonto waxaana nagu dhici doona rasaas badan haddii aan bilowno inaan aragno codsiyada ka shaqeeya mid iyo ka kale maya iyo blah blah blah
Xaqiiqdii way ka joogsan doonaan MIR waxayna u isticmaali doonaan Wayland xoog (haddii ay dhacdo in adeegsadayaashu ay maqlaan Cannonical codkooda, dabcan).
Waa maxay isha
MuyLinux.com ayaa haysa macluumaadkaas. Hubi warkooda.
Ma taageerto, waxa ay taageerto waa Xmir oo asal ahaan nuqul ka ah xwayland ..
Waxaan u maleynayaa in fanboysku aysan fahmi doonin.
Ceeriin-aasaasiga ah dijo
Cambaareyn wax dhiseysa .. ..Waxaan u maleynayaa inay si aad u nidaamsan u noqon laheyd haddii OT ay ku sameeyaan madasha, halkaasoo ay ka fududdahay in laga doodo mowduuca .. mana buuxinayno boosta faallooyin aan waajib ku ahayn inay sameeyaan. la mawduuca la mid ah .. 🙁
Sida astaanta, midda cusub waxay kufiicantahay yaraantinimadeeda .. ..laakiin waxaad moodaa inay dawacadu timo maqan tahay .. xP
Jawaab RAW-Aasaasi ah
Waa nooc fiican oo ka mid ah astaanta rasmiga ah, laakiin astaanta hadda jirta (laga soo bilaabo 2009 illaa iyo hadda waxay soo bandhigtay qaabkeedii ugu fiicnaa mana fahmin waxa cadaabta ay sameynayaan marka ay isticmaalayaan astaanta Firefox 2.0 markii ay wakiilka isticmaale u dhigayaan faallooyinka).
Si kastaba ha noqotee, Iceweasel loo qalantaa nooc loogu talagalay kormeerayaasha xallinta hoose sidoo kale.
Waxay umuuqataa inay tahay astaantii lasocotay plugin waqtigaas. Markii aan helo svg-ka oo leh astaanta cusub, waxaan cusbooneysiiyaa midka isticmaalaya Firefox 23 iyo wixii ka dambeeya.
Weli, astaanta Firefox waa mid dhexdhexaad ah. Sidoo kale, waxaan daalacday wikipedias luuqado kala duwan ah sida muuqatana midka kaliya ee isticmaalay astaanta Firefox ee SVG ayaa ah tii Faransiiska. Sikastaba, waxaan arkay xiriirin leh Wikipedia-ka ingiriiska oo kuxiraya degelka qoraaga astaanta hadda jirta oo horey ugu daabacday astaanta SVG ee Firefox-ka hada.
Illaa iyo hadda, waxaan wali sugayaa Iceweasel inay sameyso nooc yar oo ka mid ah astaantooda, maaddaama astaamaha ku yaal bar-hawleedka uu yahay mid cakiran (eeg haddii aan waqti ku qaadan karo la qabsiga astaanta Iceweasel si aan uga dhigo mid wanaagsan ).
Iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan astaanta hadda lagu isticmaalo Mozilla Firefox: http://blog.mozilla.org/faaborg/2009/06/18/the-new-firefox-icon/
Waxaan rajeynayaa in lagu tijaabin karo Inkscape.
Waxay umuuqataa mid aad ufaraf badan, xaqiiqdii waxaan doorbidayaa midka hada socda.
flat waa madow cusub
Sidoo kale, haddii aad aragti gaaban tahay, si fudud ayaad u kala sooci kartaa.
minimalism waa moodada cusub, fiiri inta ay soconeyso
Waa astaan ​​ku jirta qaabka dugsiga hoose. Waan ka helay.
Waan jeclahay! Aad u yar, oo la mid ah dugsiga hoose ..
Ku jawaab VulkHead
Ciise Ballesteros dijo
Aad u xiiso badan laakiin waxaan isticmaalaa astaamaha faenza 😛
Jawaab Jesús Ballesteros
Hadaad eegto astaanta sanadeedka 2013 + waxay lamid tahay ta 2009-2012 laakiin qaab yar
Waxay uga tageen darajo noocan oo kale ah oo ay umuuqato inay sameeyeen abuureyaasha iOS 7. Laakiin way fiicantahay, waa.
Waan jeclahay, waxaan jeclahay in midabaynta nadiifiyeyaashu ay sifiican ula shaqeeyaan mawduucayga astaanta Nitrux 🙂
Waxaan u arkaa aragti ah in loogu talagalay macruufka 7, inkasta oo qof dhibaato xagga aragtida ah qaba, astaanta cusub ay jeceshahay, maadaama hadda gebi ahaanba aan la qarin karin.
Waxaan horey ugu soo galiyay wikipedia oo Isbaanish ah
(oo ay weheliso shaashad shaashad Debian ah).
Ku jawaab mcplatano
Waxa aan u baahanahay waa inaan galiyo Iceweasel-ka hadda jira maqaalka Wikipedia, marka lagu daro tarjumaadda Spanishka maqaalka Ingiriisiga ee ka hadlaya dib-u-habeynta dhammaan alaabooyinka Mozilla mashruuca Debian.
Waxaan qiyaasayaa dadka akhriya tilmaanta sawirka inay waydiin doonaan "oo maxay tahay Debian gnusequé?"
U sheeg in kani yahay distoorkii uu Ubuntu ku salaysnaa waana kan lagu rakibi karo xitaa taleefannada gacanta waxaadna arki doontaa sida xiisaha uu u dhalan doono waqti aan fogeyn.
Waxay umuuqataa mid aad ufiican, in kasta oo ay iyaduna tahay milicsiga nashqadeynta moodada markay timaado barnaamijka softiweerka: ugu yaraan nadiifin.
Qaabab badan oo 'osx' ah .., laakiin haye, waxba kuma xirna XD.
Halkii, macruufka 7.
Ma kii ugu qurxoonaa ee 2004-tii mise aniga sidaasay ila tahay?
Ma garanayo, laakiin waxaan ka jeclahay astaanta hadda jirta in ka badan astaantii 2004 (meeraha dhulku wuxuu u eg yahay baal madoobe oo dawaco waxay u egtahay inay ka samaysan tahay dab).
Waxaan u arkaa fome, markaan si dhow u arko, uma eka dawaco-
(oo ha ii sheegin waa panda cas, maxaa yeelay ma leh dabadaas)
[sarcasm] Arrintu waxay tahay in dabadaasi iska leedahay baandaha cas, kaliya baastarradan ayaa dab qabadsiiyay halkaasna waxay uga sii dhegtay adduun baraf ka samaysan si loo damiyo dabka ay xarigga bahalnimada ahi dabada u gelisay [/ sarcasm] .
Waan ku taageersanahay, sidoo kale waxaan u maleynayaa inaysan aheyn panda cas (tan hore ayaa looga hadlay wax badan).
si aad ii rumaysatid, eeg boggan:
Waxay arki doonaan in kartuunada ka muuqda aysan jirin wax ka badan iyo wax ka yar Fox.
Ilaa aad dhib ku qaadatid inaad aqriso Wikipedia-ka Ingiriisiga ee ku saabsan asalka magaca >> http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox#Branding_and_visual_identity << inkasta oo loo doortay in dawacada la dhigo meeraha dhulka si aysan u noqon wax mashquuliya marka la shaqeynayo.
Wixii aan akhriyi jiray marwalba, waxaan eegay ama wayland laakiin arinta qosolka leh had iyo jeer waxay kuxirantahay X, wax cusub oo labadooda ay sameynayaan, waxaan moodayay inay sameyn doonaan waxa hada la isticmaalo oo aan duugoobayn iskuna dari doonin, qalad ayaan ku dhacaynaa , waa inuu jiraa ikhtiyaar saddexaad.
Waa kuwee? ASCII-style TTY?
Waxaan u arkaa xoogaa fidsan laakiin waan jeclahay inay xoogaa ka yaraato waan jeclahay taas, in kasta oo nuqulkii hore uusan isaguba xunayn
Astaanta cusubi waxay umuuqataa mid wanaagsan!
In kasta oo illaa iyo hadda aanan arkin in astaanta Iceweasel ay hesho wax isbeddel ah, maaddaama nasiib-darro ay la mid tahay isla calaamadda oo waxaa hubaal ah in uu jiri doono mid ama mid kale oo ka cabanaya (sida aan qabo, astaanta Iceweasel ayaa aad uga cajab badan tan Firefox one, laakiin waxay ku siinaysaa dareen dhiirigelin ah oo astaanta Firefox iima soo gudbinayso).
Nacalaa, maxaa waalan oo samaynta astaamo sii kordhaya. Hagaag, maxaad rabtaa inaan iraahdo, aniga oo dhigaya midabbo sasabasho ah, ka saaraya faahfaahinta, sii jilcinaya, gaar ahaan marka midka hada jira aan la buux dhaafin, umuuqdo wax horumar ah. Ma ahan shilka weyn (tan had iyo jeer sida aan qabo ra'yigayga hoose) in Chrome / Chromium ay beddeleen astaan ​​qurux badan oo loogu talagalay guri dabaq ah oo si fiican ula ciyaari doona kuwa Windows 95, laakiin waxaa la arkaa in tallaabada Mozilla ay isku mid tahay khadadka.
Waxaan ka shidaa moodooyinka dhiiga leh!
Hagaag, waan jeclahay astaanta ka soo muuqatay Mozilla Firefox 3.5, runtuna waxay tahay in astaantan iyo astaamaha intiisa kale ee raacaya naqshada fidsan loo sameeyay runtii dadka leh aragti liidata ama wax la mid ah. Sikastaba, waxaan ku dhajinayaa astaantii hore tayada tafaasiisheeda iyo waaqica ay ku sameysay gradients iyo vectors-ka si wanaagsan loo sameeyay.
Si buuxda ayaan ugu raacsanahay
Runta ayaanan dan ka lahayn, waxay beddelaan astaanta wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca, waxaan u beddelayaa Mozilla maalinta ay shaqada ka joojiso sida Mozilla. Astaanta xitaa kuma jirto desktop-kayga.
Ku jawaab juancuyo
Firefox waxay ii shaqeysaa waxyaabo yaab leh lml
Polly: Macmiil khafiif ah oo loogu talagalay Twitter
Dayactir qaladka Rsync "habka ismaandhaafka hab maamuuska - qoloftaadu ma nadiifbaa?"